घर एशियाई-ओशियनियन फुटबल स्टोरीहरू टर्की फुटबल खेलाडीहरू Cengiz ਅਧੀਨ बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
हाम्रो सेन्जीज अन्तर्गतको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, पारिवारिक तथ्यहरू, उसकी पत्नी, कार, नेट वर्थ, जीवनशैली, र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
सरल शब्दमा भन्ने हो भने, हामी तपाईंलाई उसको बायोको पूर्ण बिच्छेदको साथ प्रस्तुत गर्दछौं, प्रारम्भिक दिनदेखि लिएर जब उहाँ प्रख्यात भए। त्यो भन्दा पहिले, हामी तपाईंलाई उसको जीवन कहानी को एक संक्षिप्त चित्र सारांश देखाउँछन्।
पहिले, तपाईंलाई सायद थाहा छैन कि ऊ तुर्की हो। तपाईं आफ्नो देशको महान को रूप मा लोकप्रिय छैन - Arda Turan, केवल केहि प्रशंसकहरु उनको मेमोअर पढेका छन्। कुनै ढिलाइ नगरी, हामी सुरुको वर्षको कथाबाट सुरु गरौं।
Cengiz बचपन कहानी अन्तर्गत:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, Cengiz अन्तर्गत जुलाई १ 14 1997 of को १th तारिखमा उनकी आमा फात्मा अण्डर र बुबा हसन अण्डरमा टर्कीको सिन्धर्गी शहरमा जन्मनुभएको थियो। फुटबलर आफ्ना आमा बुबाको बीचमा मिलनबाट जन्मेका दुई बच्चाहरूमध्ये पहिलो हो जो लिखित समयमा 50० को दशकमा देखिन्छन्।
समय मा नै, सेन्जीज सधैं फुटबल खेल मा चासो देखाईएको छ। यो सबै five वर्षको उमेरमा शुरू भयो जब उनले आफ्नो देशको २००२ फिफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनलमा पुग्ने ऐतिहासिक सफलताको रेकर्ड देखे। टर्कीले प्रतिस्पर्धामा कांस्य पदक हासिल गरे पनि सेन्जीज कुनै दिन आफ्नो देशको लागि खेल्न उत्साहित भए।
जसरी युवा टर्क उमेरमा बढ्दै गए, उनका फुटबल प्रति अटुट प्रेम बढ्दै गयो। यसको मतलब5बर्षे उमेरलाई संयोगले फुटबलको साहसिक कार्यमा सहभागी हुन सकेन। यसको सट्टामा, उनको देशलाई गर्व दिनको लागि उनको पूर्ण निश्चयताले उहाँलाई अरू सबै कुरामा फुटबल छनौट गर्न उक्सायो।
Cengiz परिवार पृष्ठभूमि अन्तर्गत:
जति धेरै टर्की धर्मप्रति आफ्नो अविभाजित वफादारीको लागि परिचित छ, त्यस्तै सेन्जीज पनि एक इस्लामिक परिवार पृष्ठभूमिमा हुर्केका थिए। प्रारम्भमा, जवान सेन्जिज अण्डरका आमा बुबाले आफ्ना प्रार्थना समयलाई हरेक दिन पूर्ण समर्पण गरेको कुरा सुनिश्चित गरे।
अचम्मको कुरा के हो भने, सेन्जिज प्रायः सडकमा उत्रिन्थे आफ्ना साथीहरूसँग असर पछि (फुटबल मुसलमानको प्रार्थना) फुटबल खेल्न। हुनसक्छ आफ्नो समर्पण र मैदानमा प्रस्थान गर्नु अघि प्रार्थना गर्ने झुकावले उनलाई पछिल्लो दिनको क्यारियरमा सफल बनायो। ठिक छ, हामी यस बारे कहिले पक्का हुन सक्दैनौं!
Cengiz परिवार मूल को तहत:
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि उसको राष्ट्रियता टर्की हो। तथापि, हामीलाई थाहा छ तपाईंले सायद सोध्नुभएको छ; ऊ कहाँको हो? ... हुनसक्छ जापान वा चीन। उसको हेराईबाट हेरेर, सेन्जिज अण्डरको परिवारले माथिल्लो परिवारबाट वा ती एशियाई देशहरूमा कसैको पनि आफ्नो परिवारको वंश हुन सक्छ।
उनको टर्की जन्मस्थल (सिन्धर्गी) को एक विश्लेषणले शहर टर्कीको मारमार क्षेत्रको बालिकेसिर प्रान्तको जिल्ला हो भनेर देखाउँदछ। निस्सन्देह, प्रान्त यसको हात सुगन्धित अत्तर, कोलोन्याको लागि परिचित छ।
सेन्जीज फुटबल कहानी अन्तर्गत:
सिंदर्गीमा हुर्किएकी, फुटबल संग युवा अविभाज्य भयो। त्यस पछि, उसले चाँडै स्कूल पछि आफ्नो असाइनमेन्ट पूरा गर्दछ र आफ्ना साथीहरूसँग फुटबल खेल्न भाग्छ। अलि अलि गर्दै सेन्जिजले आफूलाई शैक्षिक प्रयास भन्दा फुटबल खेल्नमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको देखी। Cengiz बचपनका साथीहरू र फुटबल पार्टनरहरू पछि भेट्नुहोस्।
दस बर्षको उमेरमा, उनका बुबाआमा बुद्धिमानीसाथ आफ्नो छोरा दर्ता गर्न सस्तो फुटबल एकेडेमी खोज्न। भाग्यवस, तिनीहरूले बुकासपार फुटबल एकेडेमीमा ठोकर खाए जुन त्यस अवधिमा भर्खरै खोलिएको थियो। उनीहरूले सेन्जीजलाई २०० 2007 मा फुटबल संस्थानमा भर्ना गरे। हेर, तपाईंको मनपर्ने अन्तर्गत उहाँ आफ्नो पहिलो फुटबल एकेडेमीमा एकदम थोरै देखा पर्नुभयो।
बुकासोर एकेडेमीमा भर्ना हुनु भनेको युवा टर्कको सपना साकार भएको जस्तो देखिन्थ्यो जसले प्रायः फुटबललाई आफ्नो दैनिक रोटीको रूपमा देखेका थिए। समय बित्दै जाँदा सेन्जीजले महसुस गरे कि उनले आफ्नो फुटबल अभियानमा सफलता रेकर्ड गर्नको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ।
छ वर्षसम्म, जवान केटाले आफ्नो स्ट्यामिना निर्माण गर्न जारी राख्यो र आफ्नो एकेडेमीका अन्य युवा प्रतिभाहरू बीचमा आफ्ना सीपहरू सुधार गर्दै। जब उनी त्यहाँ थिए, सेन्जीज अण्डरका अविभावकहरूले राम्रो खेल संस्थान खोजिरहेका थिए जसले उसलाई फुटबलको पोर्टफोलियो विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ।
भाग्यवस, २०१ 2013 मा, उनको बुवाले उनलाई अल्टिनर्डु फुटबल क्लबसँग ट्रायलको लागि आवेदन दिन लगाउनुभएको थियो जुन उनले उडान रंगका साथ पार गरे। यहाँ Altinordu फुटबल क्लब मा उनको नम्र शुरुआत को एक सारांश छ।
Cengiz जीवनी अन्तर्गत - प्रख्यात कथा सडक:
फ्यूचर स्टारले धैर्यतापूर्वक आफ्नो नयाँ क्लबको जूनियर टीमको साथ प्रशिक्षण दिएका छन त्यसैले उनले बिस्तारै गम्भीर खेलहरूमा आफ्नो खेल्ने रणनीतिहरू प्रदर्शन गर्न अधिक समय पाए। भाग्यवस, उनी आफ्नो फुटबल पराक्रमका लागि चिनिन्थे र टर्कीको अण्डर -१ squad टीमको लागि खेल्न बोलाउँथे।
छवटा प्रदर्शन गरेर आफ्नो देशको अण्डर -१ team टीमको लागि एक गोल पछि, सेन्जीजलाई अण्डर १ squad टीममा बढुवा गरियो। २०१ 18 मा यही अवधिमा, टर्की खेलाडी पनि अल्टिनर्डु वरिष्ठ टोलीमा परिणत भयो, जुन क्लब फुटबलमा उसको व्यावसायिक क्यारियरको शुरुआत हो। यहाँ Altinordu वरिष्ठ टीम को लागी उनको प्रदर्शन मा एक झलक छ।
Cengiz जीवनी अन्तर्गत - सफलता कहानी:
तपाईंले आफ्नो बुबाआमाको अनुहारमा अभिव्यक्ति सजिलैसँग अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ जब उनीहरूको छोरा प्रोफेशनल बन्ने खबर आयो। त्यो क्षणमा, सेन्जीज भविष्यको महिमा दिनहरू रेकर्ड गर्न अझ दृढ संकल्प भए जसले उनको परिवारलाई खुशी प्रदान गर्दथ्यो।
तसर्थ, उनी २०१ 2016 मा इस्तानबुल बासाकसेरमा सरुवा भयो र आफूलाई टर्की प्रोफेशनल लिग (सुपर लिग) मा सबैभन्दा मूल्यवान खेलाडी मध्ये एकको रूपमा स्थापित गरे। भेट्नुहोस् केटा-बारी-मानिस जसले टर्की लिगमा इस्तानबुल बासाकसेरको लागि खेल्दा आफ्नै लागि नाम कमायो।
उनका नयाँ क्लबमा कम्तिमा दुई सीजनहरू, फोर्चुनले सेन्जीजलाई फेला पारे जब उनले जुलाई २०१ 13.4 मा रोमासँग १.2017. million मिलियन डलरको एक सम्झौता सील गरेका थिए। हडतालमा उनको दक्षताका लागि, टर्कले आफ्नो गोल च्याम्पियन्स लिगको डेब्यूमा गोल गरे। यसैले उनी प्रतियोगितामा गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छो टर्की खेलाडी भए।
निस्सन्देह, उनी २०१ AS मा एएस रोमामा सामेल भएर धेरै लोकप्रिय भए। २०१ 2017 टर्की फुटबलर अफ द ईयर अवार्ड जितेर पनि बढी लोकप्रिय भए।
यो बायो लेख्ने समयको अगाडि छिटो, सेन्जीज सामेल भएको छ क्यागलर Soyuncu लिसेस्टर शहर मा एक स्थायी हस्तान्तरण को विकल्पको साथ एक seasonतु लामो loanण मा। सोकर फ्यानहरूले आशा गर्छन् कि उनको अ career्ग्रेजी क्यारियर यस मार्गमा जान सक्दैन Cenk Tosun, उनको साथी देशवासी जसले देश मा धेरै प्रभाव गरेन। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Cengiz प्रेम जीवन अन्तर्गत:
सबैभन्दा पहिला, हामी यो तर्क गर्न सक्दैनौं कि उसको प्यारो हेराईले महिला प्रशंसकहरूलाई आकर्षित गर्दछ जसले आफूलाई सम्भावित प्रेमिका र पत्नी सामग्रीहरूको रूपमा लिने गर्दछ। यद्यपि टर्की खेलाडीले आफ्नो सम्बन्धको जीवन गोप्य राखेका छन।
यद्यपि, हामीले उहाँलाई आफ्नो इंस्टाग्राम पृष्ठमा उसको छेउमा दुईजना केटीहरूको हाँसोको फोटो पोस्ट गरेको देख्यौं। तसर्थ, हामीले फोटोहरू जाँच ग found्यौं र पत्ता लगायौं कि उनले महिलाको अनुहार धमिलो पार्न यथासक्दो प्रयास गरे। यसले हामीलाई केवल एउटा प्रश्न राख्छ। के तिनीहरू मध्ये एक सेन्जिज अन्डरको प्रेमिका वा सायद पत्नी हुन सक्छ?
Cengiz व्यक्तिगत जीवन अन्तर्गत:
क्षेत्र मा आफ्नो काम देखि टास्क, टर्क शान्त र स्वागत छ। Cengiz एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसले सजिलैसँग आफू वरिपरि रहेका सबै प्रकारका उर्जाहरू लाई अनुकूलन गर्न सक्छ। एक्लै समय बिताउनको लागि उहाँसँग यस गहन आवश्यकता छ, या त पानी मा वा नजिक र सबै कुराबाट टाढा, आफ्नो भित्री शक्ति पुनर्स्थापित गर्न।
जीवनशैली अन्तर्गत Cengiz:
एक शीर्ष खाच फुटबल स्टार हुनु, उनले पर्याप्त सम्पत्ति कमाएको छ कि उनलाई एक विलासी जीवन शैली बर्बाद गर्न सक्छ। सत्य कुरा के हो भने, उहाँ त्यत्ति विलासितासाथ प्रदर्शन गरिरहनुभएको होला।
फेब्रुअरी २०१ in मा महिनाको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी भोट गरिए पछि रोमा स्टारलाई एक पटक नयाँ नयाँ वोल्भो XC40 कारको साथ उपहार दिइयो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… भोलभो सेन्जिजलाई कारमा पूर्ण अधिकार दिन पर्याप्त उदार थिएन किनकि पछिल्लो महिनाको अर्को खेलाडी भोट नलिएसम्म ऊ केवल मालिक रहन्छ। भोल्भो कार उसलाई फिट गर्दछ र यो राम्रो हुनेछ यदि ऊ एक समान मोडलको किनमेल गर्छ - कसलाई थाहा छ?
अन्तमा, क्यान्सर राशिफलको व्यक्तित्व हुनु भनेको टर्की खेलाडीले एक आत्म-सुरक्षा र सुरक्षा खोजी चरित्र प्रदर्शन गर्दछ। त्यसकारण, उनीसँग आफ्नो विलासी घर र विदेशी कारहरूको मेकिंगहरू जनतामा प्रदर्शन गर्ने कुनै इच्छा छैन।
सेन्जीज नेट वर्थ अन्तर्गत:
बिभिन्न प्रतिष्ठित र पेशेवर क्लबहरूको लागि खेल्दै सेन्जीजको लागि विशाल आर्थिक कार्यवाही भयो। यसैले, यो बायो लेख्दा उसको कुल सम्पत्ति £ 3.6 मिलियन छ।
सेन्जिज शौख अन्तर्गत:
उसले पौडी खेल्न प्रेम गर्दछ। धेरै जसो समय, अन्डरले पोखरीमा आफुको स्नैपशट लिनबाट आनन्द लिन्छ। हुनसक्छ, ओलम्पिकमा उसले राम्रो स्विमर बनाउने थियो यदि फुटबलले काम गरेन भने।
Cengiz पारिवारिक जीवन अन्तर्गत:
उसको पेशाको कारण, ऊ केवल आफ्नो परिवारसँग केहि समय बिताउन पाउँदछ। यद्यपि सेन्जिज अन्डरको परिवारका सदस्यहरूबीच रहेको बन्धन अथाह छ।
हेर्नुहोस् कि उनका आमाबुबा र बहिनीले उनलाई बिदाइ कसरी बोलाए जब उनी रोमको जीवन परिवर्तन गर्दै (एएस रोमामा सामेल भए पछि) २०१ 2017 मा शुरू भयो। अब हामी उनको बुवा, आमा र भाइबहिनीहरूका बारे जान्न सकौं।
सेन्जिज अंडर फादरको बारेमा:
सुपर ड्याड एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हो जसले आफ्नो क्यारियर जीवनमा एक जबरदस्त मार्ग प्रशस्त गरेको छ। सत्य कुरा भन्नका लागि, सेन्जिजका बुबा हसन अन्डर एक महान व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो छोराको जन्म प्रतिभा पत्ता लगाउनको आफ्नो मातृ दायित्व पूरा गर्नुभयो। दुबै धेरै नजिक छन् किनकि तपाईंले देख्नुभयो कि एक जवान सेन्जिज बुबा, हसन अन्डरको अलावा आत्मविश्वासले पोष्ट गर्दै छन्।
उनको छिटोपनको लागि धन्यवाद, हसन अण्डर अब आफ्नो कडा मेहनतको कार्यको साथसाथै एक सपनादर्शी बुबाको भाग्य पनि बटुल्दै छ। के तपाईंलाई थाहा छ?… हसन अण्डर प्रायः आफ्ना बच्चाको लागि जब उनी मिडियासँग कुरा गर्छन् प्राय: प्रार्थना गर्दछन्। यहाँ उनले धार्मिक रुपमा के भने;
“म आफ्नो छोरामा गर्व गर्छु। भगवान उसलाई बाटो खोलिदिनुहोस्। अल्लाह तपाइँलाई कुनै दुर्घटना बिना लामो जीवन दिन सक्छ। "
Cengiz आमा अन्तर्गत:
अर्को उल्लेखनीय आइकन जुन पूर्व रोमा प्लेयरलाई समर्थन गर्दछ उनकी आमा फातमा अन्डर हो। केवल महिलाहरूले फात्माले आफ्नो छोरालाई गरेको निःशर्त प्रेमको स्तर बुझ्न सक्दछन्। यहाँ, उनको मनमा रुँदै अन्त भयो किनकि सेन्जीजले एउटा बिदा लिईन्।
२०१ 2017 मा यति पछि, सेन्जिजकी आमाले उनको छोरालाई रोमको लागि बिदाइ दिंदा आँसु थाम्नै सकिनन्। वाह! त्यो हार्दिक भावनात्मक क्षण राष्ट्रिय स्टारको दिमागमा सँधै स्थायी स्मृति छोड्नेछ।
Cengiz भाई बहिनीहरूको बारेमा:
तपाईं सेन्जिजलाई भाग्यशाली खेलाडी मान्न सक्नुहुन्छ किनकि उहाँ एक प्यारी बहिनी फात्मा नूर पाउनुभयो, जो एक मात्र भाइबहिनी हो। उनको आमाजस्तै, सेन्जिजकी बहिनी फात्मा नूर पनि रोम जाँदा टर्की छाडेपछि अत्यन्त रोए। खैर, यो निर्विवाद छ कि सेन्जिज अन्डरको परिवारसँग यस कडा भावनात्मक बन्धन छ। ऊ कस्तो मायालु छिन बहिनी छ। उनले कसरी उसलाई मिस गरिसकेकी हेर्नुहोस्।
Cengiz नातेदार अन्तर्गत को बारे मा:
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, सेन्जीज काका र काकीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उनको सफलतालाई प्रभावित गरे। त्यो मात्र होईन, तर उनका काचेजनहरू र अन्य आफन्तहरू पनि परिवारमा उहाँ जस्तो कोही छ भन्नेमा गर्व गर्दछन्। यदि उनका हजुरबुबा र हजुरआमा अझै जीवित छन् भने, तिनीहरूले पक्कै पनि उनको उपलब्धि मनाउँथे।
अनचेल्ड तथ्यहरू अन्तर्गत Cengiz:
हाम्रो जीवनी समेट्न, यहाँ केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उहाँको जीवन कहानीको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: Cengiz वेतन अन्तर्गत र प्रति सेकेन्ड कमाई:
प्रति वर्ष £ 4,466,154
प्रति महिना £ 372,180
प्रति हप्ता £ 85,756
प्रति दिन £ 12,251
प्रति घण्टा £ 510
प्रति मिनेट £ 8.5
हामीले घडीमा टिकको रूपमा रणनीतिक रूपमा उसको आय विश्लेषण गरेका छौं। कृपया, प्रति सेकेन्ड उसको तलब हेर्नुहोस् र तपाईं यहाँ आएदेखि उसले कत्ति धेरै कमाएको छ हेर्नुहोस्।
किनकि तपाईले खोल्नु भयो Cengiz अन्डरको जीवनी कथा, यो उसले कमाएको हो ...
तथ्य # १: Cengiz धर्म अन्तर्गत:
99.8 XNUMX..XNUMX% मुस्लिम मिलेर बनेको मुलुकमा जन्म हुनु इस्लामिक विश्वासको साथ बढ्नको लागि एक मान्य कारण हो। सेन्जिज अण्डरका आमा बुबा भक्त मुस्लिमहरू हुन् जसले उनीहरूको धार्मिक दायित्वहरूलाई अन्य सबै कार्यक्रमहरू भन्दा माथि विचार गर्छन्। तसर्थ, फुटबलर र उनको बहिनी इस्लामी विश्वास मा हुर्केका थिए।
तथ्य # १: घर प्यारो घर:
सेन्जीज अन्डरको विश्व-स्तरीय प्रदर्शनले धेरै युवाहरूलाई फुटबलमा उद्यम गर्न प्रेरित गरेको छ। के तपाईंलाई थाहा छ?… सेन्जिजको गृहनगर सिन्धर्गीले आफ्नो सम्भावनालाई एएस रोमामा प्रख्यात हुनु अघि नै स्वीकार्यो।
जून २०१ in मा आफ्नो बिदाको बेलामा सिन्धर्गीका मेयर एकरेम यावासले उनलाई एउटा तस्बिर उपहार स्वरूप दिए जुन उनको नम्र शुरुआत देखिन्छ। मलाई विश्वास गर्नुहोस् जब म तपाईलाई भन्छु कि फोटो केन्जीज लाइफ स्टोरीलाई आकार दिएका यती धेरै प्रेरणा मध्ये एक भयो।
तथ्य # १: विवाद:
के तपाईंलाई थाहा छ? ... सेन्जिज अन्डरको जीवनीको सबैभन्दा ठूलो बिन्दु भनेको उहाँको सैन्य सलाम गोल उत्सव हो। फेब्रुअरी २०१ 2018 मा, बेन्भेन्टो बिरूद्ध गोल गरेपछि सेन्जीसले सलाम गरे।
प्रशंसकहरूले टर्की सशस्त्र बलको सम्मान गर्नु भनेको उत्तरी सिरियामा अपरेसन गरे। अवश्य पनि, धेरै प्रशंसकहरूले उनको कार्यहरू अस्वीकृत गरे र आलोचना गरे। सेन्जिज अन्तर्गतको विवादास्पद फोटो हेर्नुहोस्।
तथ्य # १: उहाँ फिफामा कस्तो देखिनुहुन्छ:
फिफा रैंकिंगबाट हाम्रो विश्लेषणको आधारमा, सेन्जिज अन्डर पक्कै विपरित हो क्यागलर Soyuncu उहाँसँग शारीरिकता र सुरक्षामा धेरै अभाव छ। कुनै श doubt्का बिना, उनी आक्रमण, कौशल, आन्दोलन र शक्ति को मामिलामा मीठो छ।
तथ्य # १: Cengiz अन्तर्गत र अन्डरटेकरको सम्बन्ध:
लीस्टर शहरसँगको उसको सम्झौताको खबर सार्वजनिक भएपछि WWE का रिटायर्ड रेसलर, अंडरटेकर रमाइलो भयो र अन्ततः अंग्रेजी क्लबको फ्यान भयो। कसले विश्वास गर्ला होला कि डेडम्यानले पनि फुटबल हेर्न चासो राख्यो?
सेन्जिज अन्डरको जीवनीको द्रुत पकडको लागि, यहाँ एक तालिका छ जुन उसको बारेमा तथ्यहरू तोड्दछ।
पुरा नाम: Cengiz अन्तर्गत
निक नाम: टर्की डिबाला
जन्म मिति: 14 जुलाई जुलाई 1997
जन्मस्थान: सिंदर्गी, टर्की
पिता: हसन अन्तर्गत
आमा: फातमा अन्तर्गत
Siblings: फातमा नूर (बहिनी)
नेट मूल्य: £ 3.6 लाख
वार्षिक वेतन: £ 4,466,154
बजार मूल्य: Million २१ मिलियन (२०२० सम्म)
उचाइ: १.1.73१ मीटर (मीटरमा) र ′ ′ ११ ″ (खुट्टामा)
अन्तमा, सेन्जीज अण्डरको जीवनीले देखाउँदछ कि हामी जहाँ कहीं पनि आफैं भेट्यौं हामी हाम्रो सपनाको उचाइ हासिल गर्न सक्छौं। टर्की खेलाडीले जस्तै हामीले पनि सँधै हासिल गर्न चाहेको क्यारियरको खोजीमा हामीले आरामदायी क्षेत्र (घर) छोड्नुपर्दछ।
यो पनि याद राख्नुहोस् कि हाम्रा प्रियजनहरू (यो आमाबाबु, भाईबहिनी वा साथीहरू हुन) सधै हामी सफल हुन पर्खिरहेका हुन्छन्। हामीले तिनीहरूलाई गर्व बनायौं जस्तो सेन्जिज अण्डरका आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरू उहाँप्रति छन्।
हामी आशा गर्दछौं कि अंग्रेजी प्रिमियर लिग (EPL) सेन्जिजका लागि उपयुक्त देखिन्छ किनकि उसले आफ्नो शक्तिको अन्वेषण गर्दछ ब्रान्डन रजर्स ' लीसेस्टर शहर।
हाम्रो Cengiz अन्डरको बायो पढ्नका लागि धन्यबाद। यदि तपाइँ हाम्रो लेखमा सही जस्तो नदेखिने कुनै कुरा भेट्टाउनुभयो भने, कृपया तपाइँको टिप्पणी दिनुहोस् वा तपाइँको जीवन कथाको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ हामीलाई बताउनुहोस्।